တရုတ်မှ သားရေ အဝယ်ရပ်နားထား၍ မုံရွာ သားရေနယ်လုပ်ငန်းများ ပြည်တွင်း ဖိနပ်လုပ်ငန်းများသာ အာ?? - Yangon Media Group
တရုတ်မှ သားရေ အဝယ်ရပ်နားထား၍ မုံရွာ သားရေနယ်လုပ်ငန်းများ ပြည်တွင်း ဖိနပ်လုပ်ငန်းများသာ အာ??
မုံရွာ၊ စက်တင်ဘာ ၃
တရုတ်နိုင်ငံမှ နွားသားရေအဝယ်ရပ်ဆိုင်ထား ခြင်းကြောင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာစက်မှုဇုန်သားရေနယ်လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ပြည်တွင်းခြေညှပ်ဖိနပ်လုပ်ငန်းများကိုသာ အားကိုးရောင်းချနေရကြောင်းသိရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ နွားသားရေ အဝယ်ရပ်ဆိုင်းထားသည့်အပြင် နည်းပညာနှင့်စက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိ ခြင်းကြောင့်လည်း ပြည်ပဈေးကွက်သို့ကုန်ချောပစ္စည်းများအဖြစ်ပို့ ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဖြစ်နေရသည်။
အာဆီယံအဆင့်ကိုတောင် တင်ပို့နိုင်တဲ့ စွမ်းအားမရှိသေးဘူး။ ငွေကြေးအရင်းအနှီးနဲ့ နည်းပညာအခက်အခဲတွေရှိတယ်။ သားရေနယ်လုပ်ငန်းသုံးဓာတု ကုန်ကြမ်းတွေကိုပြင်ပနိုင်ငံတွေက တင်သွင်းနိုင်ဖို့ အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်”ဟု မုံရွာမြို့စက်မှုဇုန်ရှိ သား ရေလုပ်ငန်းစုမှ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သားရေကို ကုန်ကြမ်းမှ ကုန်ချောအဖြစ် အဆင့် မြှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသောတိုင်းများတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပါဝင်ပြီး သားရေကုန်ကြမ်းမှ ကုန်ချောရရှိရန် ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြု သောဆေးကြောရေများသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေ ပြုနိုင်ရန်အနံ့ဆိုးများမထွက်ရှိစေရန်ပြုလုပ်သည့် နည်းပညာအကူအညီနှင့် ငွေကြေးအထောက်အပံ့များလိုအပ်နေသည။် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မုံရွာစက်မှုဇုန်တွင် အကြီးစား သားရေနယ်လုပ်ငန်းလေးခုနှင့်အလတ်စားသုံးခု ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ ကလေးမြို့နယ်၊ ရေဦးမြို့နယ်တို့တွင် အသေးစားလုပ်ငန်းတစ်ခုစီနှင့် ချောင်းဦးမြို့နယ်တွင် သုံးခုစုစုပေါင်း ၁၃ ခုရှိကြောင်း သိရသည်။
နောက်ထပ် စာချုပ်သစ်ကို မက်ဆီ ချုပ်ဆိုဦးမည်ဟု ဘာစီလိုနာ ဥက္ကဋ္ဌ ဘာတိုမီယူ ယုံကြည်
ကက်သရင်း ဇီတာဂျုန်းနှင့် မိုက်ကယ်ဒေါက်ကလပ် အိမ်ထောင်သက် ၁၇ နှစ်ပြည့်ပြီ
ထိုင်းရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း ကလေးငယ်သောင်းချီ၏ အနာဂတ်ပညာရေး စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ကြုံနေရ ??